I-Digby: Ukuqhuba urhwebo lwasekhaya kunye neeNkqubo zeSelfowuni | Martech Zone
Kuyinkolelo yam ukuba okubhaliweyo kuseludongeni kwaye iindawo zentengiso ngoku zenza utyalomali oluyimfuneko kwizicwangciso ezihambayo. Iselfowuni iyeyona nto iphambili kuphando lwabathengi kunye nokuziphatha kokuthenga. Ukudityaniswa nokwamkelwa okukhulu kwee-smartphones, akukho mathandabuzo okuba nefuthe kwiselfowuni kwiminyaka ezayo. I-Digby ibonelela nge-SDK apho usetyenziso lweselfowuni lomthengisi lunokubandakanya ngokulula geofencing -Yenza loo ndawo yendawo-yazi ngendawo esekwe kuDigby kubahlalutyi kunye namandla okuthengisa.
Ngokusebenzisa iDigby Localpoint ™ Mobile Platform, equlathe uhlalutyo, ukufikelela ngaphandle, indawo, kunye nendawo yokugcina izinto, iDigby inyusa itekhnoloji esekwe kwindawo ukuvumela iimveliso ukuba zityhale ngokufanelekileyo, zijolise kwindawo ezazi indawo kwaye zitsale, zinefuthe, kwaye zibe nobudlelwane kubathengi bazo onke amajelo-onke ngamava abo anamagama eselfowuni.
IQonga leDigby yeNgingqi ™ yeFowuni
Ukufikelela kwindawo -Abathengi banokuba ngamanyathelo okushiya ezona zivumelwano zakho zingcono kwaye awusoze wazi. Kutheni ubavumela ukuba bahambe xa ukwazi ukufikelela kuzo kwangoko kwaye ubatsalele evenkileni ngokunxibelelana nabo ngokuthe ngqo kwi-app yakho yeselfowuni? Ukufikelela kuluntu kwindawo ekuthiwa yiDigby kukunceda wenze olo nxibelelwano ngesuti enamandla okuthengisa okwazi indawo eyilelwe kuphela iimveliso.
Indawo yendawo -Abaxhasi abasebenza ngeSmartphone ngoku banakho ukujonga amaxabiso okhuphiswano ngelixa uhamba kwiivenkile zakho. Ngena ekuhlaseleni ngokubonelela ngamava akho eselfowuni aqhuba ixabiso, ukuzibandakanya kunye nekhadi lokunyaniseka lokugqibela. Indawo yaseDigby yendawo ekuvumela ukuba ubenakho ukubandakanyeka kwivenkile kunye neseti enamandla yezixhobo zokwazisa, ukunceda, kunye nokukhuthaza abathengi abaxhumeneyo xa kwaye kubaluleke kakhulu.
Uhlalutyo lwendawo -Ngaphezulu kwe-90% yengeniso yentengiso ivela evenkileni kodwa incinci kakhulu ngoku malunga nomthengi kubahlalutyi evenkileni. I-Digby Localpoint Analytics ikuvumela ukuba ufumane isitayile sewebhu kubahlalutyi yeendawo zakho ezibonakalayo kunye nedatha exabisekileyo malunga nokuba kwaye nini abathengi bakho bandwendwela ivenkile yakho, ekuvumela ukuba ufunde ngakumbi ngabo ukubakhonza ngcono.
Indawo yaseVenkile yendawo -Abathengi bafuna ukuba ukhangelo lwakho olunophawu, ukukhangela kunye nokuthenga amava eselfowuni kube mnandi, kulunge kwaye kuluncedo kuzo zombini izibonelelo kunye nomxholo. I-Digby Localpoint Storefront ikuvumela ukuba wenze amava awodwa, anikwe amandla okuthengisa kwaye ukhuthaze kwaye wazise umthengi wakho ngokusebenzisa i-app yakho ephawulweyo yeselfowuni kunye newebhusayithi ephuculweyo.
tags: AndroidYogbyindawo yendawo yedigbygeofencingiphoneiselfowuni yendawoindawo yaziuhlalutyo lweselfowunimobile sdk
Hluza Ingxolo yakho yeNtlalontle ngeCloze